Gantaal Laga Soo Ganay Yemen oo Dad ku Dilay Sacuudiga – Radio Daljir
Maarso 26, 2018 9:24 b 0
Sacuudi Carabiya ayaa ku dhawaaqday inay ciidamadeeda ay qabteen tiro gantaalo nooca Ballasticka oo kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ay kusoo rideen dhowr goobood oo katirsan dhulka Boqortooyada Sacuudi Carabiya .
Afhayeen u hadlay isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ayaa ku sheegay war qoraal ah oo uu soo saaray, inay fashiliyeen todobo gantaal oo sadex ka mid ah kusii jeeday magaalada Riyaadh.
Colonel Turki al-Maliki ayaa sheegay nin degaan ku ah Sacuudiga oo u dhashay dalka Masar inuu u geeriyooday, kadib gantaalka shrapnel oo kusoo dhacay wadanka Sacuudiga, waana khasaarihii ugu horeeyey ee dhimasho ee gantaalada Xuutiyiinta ay ka gaystaan Sacuudiga muddo sadex sano ah, waxaana uu xusay inay jiraan dad ku dhaawacmay.
Al-Masirah oo ah shabakad Telfishin oo ay maamulaan Xuutiyiinta ayaa sheegay gantaalada inay ku ganeen garoomada diyaaradaha ee ku yaala magaalooyinka Koonfurta dalka Sacuudiga sida Abha, Jizan iyo Najran.
Muhammad al-Bukhaiti, afhayeen katirsan Xuutiga ayaa sheegay gantaaladan inay jawaab u ahaayeen duqaymaha magaalooyinka Yemen iyo go’doominta shacabka Yemen.
Axaddii lasoo dhaafay, Abdul Malik Al-Houthi oo ah hogaamiyaha mucaaradka Xuutiyiinta ayaa balan ku qaaday inay adeegsan doonaan hubka tiirada dheer, ayna askareen doonaan dagaal yahano badan, kuwaasi oo iska caabinaya weerarada kaga imaanaya Sacuudi Carabiya.